दु-र्घटनामा परेको समाचारले गायक प्रमोदलाइ तनाव, गरे यस्तो सुझाव!
बैशाख १९, २०७८ RT
काठमाडौँ, केहि दिन अघि गायक प्रमोद खरेल दुर्घटनामा परेको भन्दै एक अनलाइले प्रकासन गरेको थियो । भ्वाइस अफ नेपालको सुटिंग सकेर फर्कदै गर्दा दुर्घटनामा परेको भन्दै समाचार प्रकाशन भएको थियो । तर वास्तबमा उक्त्त समाचार गलत हो । गायक प्रमोद आफैले फेसबुकमार्फत भनेका छन कि उनी कुनै दुर्घटनामा परेका छैनन् ।
उक्त्त गलत समाचारपछि प्रमोदलाइ उनको शुभ चिन्तक फ्यानहरुको धरै म्यासेज र कल आएको हुदा अनलाइन तथा ग्रुपहरुलाई यस्तो गलत समाचार प्रकासित नगर्दिन उनले अनुरोध गरेका छन् । उनले अन्त्यमा भनेका छन्, ‘म एकदमै ठिक छु’ मलाइ केहि भएको छैन। म आफ्नै घरमा छु र उक्त्त समाचारलाइ गलत मान्दिनु होला भनेका छन् ।’
गायक प्रमोदले लेखेका छन्, ‘केहि अनलाइन न्युजहरुमा भ्वाइसको सुटिंगबाट फर्कदा मेरो गम्भीर दुर्घटना भयो भनेर भ्रामक कपोकल्पीत र झुटा समाचार प्रकाशन भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । म एकदम ठिक छु र म कुनै दुर्घटनामा नपरेको जानकारी गराउछु ।
समाचारको नाममा सोशल मिडियाको यसरी दुरुपयोग नगरीदिनु होला, प्लिज। गलत समाचार सुनेर चासो व्यक्त गर्नु हुने सबैलाइ धन्यवाद र यो गलत समाचार हो भनेर बुझिदिन हुन सबैलाइ अनुरोध गर्दछु ।”
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख १९, २०७८०७:४०
किन विराट कोहलीले आफ्नी श्रीमती अनुष्काको जन्मदिनमा दिएनन शुभकामना?
४४ मिनेट अगाडि SG
१८ घण्टा अगाडि SG
१८ घण्टा अगाडि RT
२१ घण्टा अगाडि SG
पल शाहको आक्रोश: ४०० को अक्सिजन नदिएर लाश जलाउनेलाई १००० रुपैया भत्ता?